Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » IiTurks kunye neCaicos » I-Turks kunye neCaicos Islands zikhuphe iNqanaba 1 leSaziso esivela kwi-CDC
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeCaribbean • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • IiTurks kunye neCaicos
Ngaphezulu kwama-65% abantu abadala abagonyelweyo, nto leyo isenza iTurks kunye neCaicos Islands lelinye lawona mazwe angenawo umhlaba.
Iziqithi zeTurks kunye neCaicos zifumene iNqanaba lokuLumkisa 1 kuMaziko oLawulo lweZifo
Isaziso esitsha sezempilo sokuhamba simele isiganeko esibalulekileyo kwiphulo lokugonya iTurks kunye neCaicos Islands
Izinga lokugonya elomeleleyo lelizwe elidityaniswe nempumelelo yeenkqubo zalo zokhuseleko likuthintele ukusasazeka kwe-COVID-19
IBhodi yabakhenkethi beTurks kunye neCaicos Islands, elinegunya lezokhenketho eTurks naseCaicos Islands, babhengeze ukuba indawo ekuyiwa kuyo ifumene iNqanaba lokuLumkisa loku-1 Amaziko oLawulo lweZifo (CDC). Isaziso esitsha sempilo yokuhamba simele isiganeko esibalulekileyo kwiphulo lokugonya iTurks kunye neCaicos Islands, eyaqala ngoJanuwari 2021 kwaye ikhokelele ngaphezulu kweepesenti ezingama-65 zabantu abadala abafumana idosi enye yokugonya iPfizer-BioNTech - lelinye lawona mazwe agonyelweyo ehlabathini.
Izinga lokugonya elomeleleyo lelizwe elidityaniswe nempumelelo yeenkqubo zalo zokhuselo likuthintele ukusasazeka kwe-COVID-19 kwaye yavumela ukuhamba okukhuselekileyo okuqhubekayo kwiiTurks naseCaicos Islands. Indawo ekuyiwa kuyo iwonwabele amazinga okuhlala abantu kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, kubandakanya nomyinge wama-70 epesenti kumthamo ka-Epreli 2021.
"Siyazingca kakhulu ukuba uninzi lwabantu abadala bagonyiwe, basinceda ukugcina ijika egobongweni kwaye sifumana iNqanaba lokuLumkisa loku-1 kwiCDC ngokuhamba ngokukhuselekileyo ukuya kwiiTurks naseCaicos Islands," utshilo u-Hon. UJosephine Connolly, Umphathiswa Wezokhenketho. “Sinombulelo kumaqabane ethu axabisekileyo kushishino lwezokhenketho ngokuxhasa iinzame zeTurks kunye neCaicos Islands ngokuqalisa amaphulo angqamene nepropathi, kunye noluntu ngokujonga kwabo ngokugonya nokubambelela kwimigaqo. Sisafuna abahambi bamanye amazwe ukuba baqinisekiswe ngu I-TCI iqinisekisiwe, indawo yethu yokuqinisekisa ngemigangatho, ngaphambi kokundwendwela iziQithi ukuqinisekisa impilo yabantu bonke. ”
Iindaba ze-CDC's Alert Level 1 zifika zilandela ezona ngxelo zakutshanje zoMphathiswa Wezempilo kunye Neenkonzo Zoluntu ukuba iipesenti ezingama-65 zabantu abadala bafumene idosi yabo yokuqala yePfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Ukongeza, iipesenti ezingama-55 zabantu abadala bagonywe ngokupheleleyo ekubeni befumene zombini izitofu.
Ezi zibalo zinamandla zithetha ngokusebenza kwephulo lokugonya eliqaliswe nguRhulumente waseTurks kunye neCaicos Islands, ebandakanye iibhodi zezaziso ezikhuthaza ugonyo kwiziqithi zonke; izikhuthazi ezivumela amashishini anabasebenzi abagonyelwe ngokupheleleyo ukuba basebenze kwiindawo eziphezulu; kunye namanyathelo axabisekileyo ehotele, kwivenkile yokutyela, nakumaqabane asebenza kubakhenkethi abongoza abo bahlangana nabo ukuba bagonywe, kubandakanya nokunikezelwa rhoqo, ukunceda ukuzikhusela nabanye. Ukongeza, iiTurks kunye neCaicos Islands zihlala zigcina iinkqubo zazo zokhuseleko kumgangatho owamkelweyo kwilizwe liphela.
Ukongeza kwinqanaba layo lokuLumkisa, iiTurks kunye neCaicos Islands zifumene iStamp yoKhuseleko oluKhuselekileyo kwiBhunga lezoKhenketho leHlabathi, elichaza ukuba iinkqubo zalo zokhuseleko ziyahambelana neemfuno ezingundoqo ezimiselwe yi-WTTC, kunye noorhulumente neengcali zezempilo, yenzelwe ukumisela uhambo olukhuselekileyo. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukukhuthaza ukuhamba emzimbeni okufanelekileyo, ukunyanzelisa umda wobungakanani, ukufuna iimaski kwiindawo zikawonke-wonke, kunye nokuqinisekisa ubuchule bokuhlamba izandla kunye nogutyulo lwelindle, phakathi kwezinye izinto ezingundoqo 'zokuHamba ngokukhuselekileyo'.
Iziqithi zeTurks kunye neCaicos zihleli ziphaphile kwaye zingaguquguquki ngokubhekisele kwiimfuno zabahambi zamanye amazwe, ezifanayo kubahambi abagonyiweyo nabangagonyelwanga. I-TCI yelizwe eliqinisekisiweyo, i-portal yokuqinisekisa umgangatho kwiwebhusayithi yeBhodi yabakhenkethi beTurks kunye neCaicos Islands, ibonelela ngesigunyaziso sokuhamba kuphela emva kokuba iindwendwe zinike ubungqina beziphumo zovavanyo lwe-COVID-19 ze-PCR ezingekhoyo kwiziko lonyango eliqinisekisiweyo kwiintsuku ezintlanu ngaphambi kokufika kwabo. indawo ekuyiwa kuyo, ubungqina be-inshurensi yezonyango egubungela iindleko ze-COVID-19 ezinxulumene nezonyango kunye nephepha lemibuzo eligcwalisiweyo lokuhlola impilo. Ixesha leentsuku ezili-14 lokuvalelwa yedwa alifuneki kubakhenkethi xa sele bevavanyile ukuba abanayo intsholongwane.
Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya, iindwendwe zinokulindela ukubonisa ikopi yazo I-TCI iqinisekisiwe Izatifikethi koogunyaziwe bendawo, bonke abo banxiba izixhobo zokuzikhusela, ngaphambi kokuqhubeka nokufudukela apho ubushushu bujonga khona umhambi ngamnye. Ekumkeni, uninzi lwabahambi ngoku kufuneka banikezele ubungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19 ukuze bakwazi ukubuyela kwilizwe labo lokuzalwa; Iihotele ezininzi kwiiIqithi ngoku zinendawo zokuvavanywa kwindawo, zivumela amava alula kwaye angenamthungo.
Iziqithi zeTurks kunye neCaicos — ikhaya “lolwandle olugqwesileyo kwihlabathi” —iindawo ezinenkwenkwezi ezintlanu ezinqwenelekayo zeholide zokuphola, ezeshishini, kunye neendwendwe ezivela kwihlabathi liphela. Ngeziqithi ezisithoba eziphambili kunye neziqithi ezimalunga nama-40 ezincinci kunye neendawo zokuhlala ezingenabemi, indawo ekuyiwa kuyo ikhuselekile ngokwemvelo yokuhamba kule paradigm intsha yokuhamba emzimbeni, inikwe ububanzi bayo, indawo emangazayo yangaphandle, imfihlo, indawo yokuhlala ebanzi, kunye neephothifoliyo eyodwa yezindlu zabucala ezingaqhelekanga kunye iiholide zabucala zeziqithi. Uluhlu olubanzi lweendawo zokuvavanya ze-COVID-19 kuwo onke amaSisi Islands ziyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni yeBhodi yabakhenkethi.